Nuclear Winter (आणविक हिउँद) भनेको के हो ?
वातावरण प्रदूषण, आणविक विष्फोटन, रासायनिक उत्पादन जस्ता कारणले वायुमण्डल बाक्लो र धमिलो हुन्छ । यसरी वातावरण पदूषणको कारणले धुलो, धवाँ वायुमण्डलमा मिसिन गई सूर्यबाट आउने प्रकाश पूर्ण रुपमा पृथ्वीमा आउन नसकी पृथ्वी चिसिँदै जाने र पूर्ण उज्यालो नहुने अवस्थालाई Nuclear Winter भनिन्छ । यो वातावरणीय प्रदूषणको डरलाग्दो समस्या हो ।
2 के हो ल्याण्डपुलिङ?
4 Career News and Info श्रावण ८, २०७४
5 मिस नेपाल प्रतियोगिता
6 विश्व नारी नेपाली साहित्य सम्मेलनले मनोनित साहित्यिक दुत
7 Career News and Info जेठ ३०, २०७४
10 परमाणु सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन